Luulyo | 2009 | WEEJIDOW
Archive for Luulyo, 2009
Wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda dowladda KMG oo weeraro cusub ku hanjabay
Luulyo 31, 2009
Dowladda KMG wasiirkeeda dekadaha iyo gaadiidka badda Dr. Maxamed Ibrahim Xaabsade ayaa maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho isagoona uga hadlay arrimo kala duwan.
Dr. Maxamed Ibaraahim Xaabasade ayaa waxaa uu sheegay in ay diyaar yihiin ciidamo fara badan oo u tobabaran dowladda KMG si ay weeraro ugu qaadaan isla markaana maamulada ula wareegaan gobolada Gedo, Bay iyo Bakool, waa sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa uu dhinaca kale ka hadlay oo uu soo cusboonaysiiyay in ay xiran yihiin dekadaha iyo garoomada aysan maamulin dowladda uu wasiirka ka yahay.
Wuxuuna sheegay in uu gaba gabo marayo barnaamij la doonayo in go’aan rasmi ah looga gaaro si loo dhaqan geliyo xayiraada isaga uu saaray garoomadaasi iyo dekadaha ka baxsan gacanta dowladda KMG.
Si kastaba oo ahaataba, hadalkan ayaa qeyb waxaa uu ka yahay ereyo kul-kulul oo mudooyinkan dambe la soo baxay Maxamed Ibraahim Xaabsade kuna weerarayo xoogaga dagaalka ku haya dowladda KMG.
War Deg Deg ah: Dagaal u Dhexeeyay Ciidamo kala taabacsan Indha Cadde iyo C/raxmaan Janaqoow oo Muqdisho ka dhacay
Luulyo 30, 2009
Warar Dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Iska horimaad maanta magaalada Muqdisho ku dhaxmaray Maleeshiyaad kala taabacsan Yuusuf Indha Cadde iyo Goobaanle oo dhinac ah iyo Maleeshiyo ilaala u ah C/shaaweeye iyo C/raxmaan Janaqoow.
Duhurnimadii maanta ayay Tacshiirad xoogan labada ciidan isku dhaafsadeen agagaarka Zope oo labada dhinac wada joogaan.
Inta la ogyahay dagaalkaasi waxaa ku dhintay ilaa iyo 2-qof oo ahaa dhinacyadii dagaalamayay.
Goob joogayaal ayaa sheegay in Ciidanka Goobaanle oo kaashanaya kuwa Indha Cadde ay Rasaas ku fureen gaari dagaal oo uu watay C/fitaax shaaweeye taas oo keentay in Maleeshiyaadka Janaqow ay qaab Qabiil ugusoo gurmadaan Shaaweeye.
Xaalada ayaa degan waxaase weli isku ciil qaba Maleeshiyaadkii dagaalamay meelaha ay dowlada KMG ka maamusho Muqdisho ayaa ah meelaha ugu amaanka xun Muqdisho.
Mudane katirsan Baarlamanka oo sheegay in Ciidanka DKMG Gobalka Gedo ay wadaan Nabad gelyo xumo
Xildhibaan katirsan Baarlamanka dowlada Federaalkan kanasoo jeedo gobalka Gedo ayaa si kulul u cambaareeyay abaabulada ciidanka dowlada iyo Maleeshiyaad Suufi ah ay ka wadaan degmada Doolow.
Mudanahan katirsan Baarlamanka dowladda Federaalka ayaa ka digay in weeraro lagu qaado deegaanno Nabdoon oo Gedo katirsan.
” waxaan ka digaynaa in Weerar lagu qaado degmooyinka Gedo oo ay ka Islaaxda nabad iyo kala dambayn, ma aqaan waxay dagaal ka faa’iidayaan kuwa Doolow ku sugan” ayuu yiri Xildhibaan Hilowle.
Xildhibaankan kasoo jeeda Beesha Gedo degto ayaa wax aan meel kasoo qaad lahayn ku tilmaamay ciidanka dowlada ee ku sugan Doolow isagoona sheegay in aysan dhali karin Nabadda Gedo ka jirto.
Hadalkan kasoo yeeray Xildhibaan Hilowle ayaa ah mid taageeraya Maamulada ay xoogaga hubaysan ka dhiseen Gobalka Gedo taas oo Nabad u horseeda shacabka Gedo.
Ahlu sunna oo shaacisay in ay jiraan Abaabulo Ciidan oo ay ka wadaan Dhamaan Goballada Soomaliya.
Culimada Ahlu sunna ayaa Maanta markii ugu horaysay ka dhawaajisay in ay jiraan Ababulo Ciidan oo ay ka wadan 18-ka Gobal ee Dalka Soomaliya, Xilli looga bartay in ay Difaac ka galaan Goobo cayiman oo lagu soo weeraro.
Warar lagu kalsoon yahay oo soo garay warbaahinta raxanreeb ayaa sheegaya in saraakil ka tirsan Culimada ahlu sunna oo maanta shir jaraa,id ku qabatay Magaalada muqdisho ay ka dhawaajiyeen Abaabuladan ay ka wadaan Dhamaan goballada Dalka Soomaliya.
Culimada Ahlu sunna oo Goballada Dhaxe ee dalka Soomaliya Dagaalo kala duwan kula galay Kooxo Diimeedyada ka jira Dalka ayaan hada ka hor shaacin in ay abaabulo ka hirgalinayaan Dhamaan Goballada dalka Soomaliya .
Sheekh abuu Bakar Axmed Cali oo ah sarkaal ka tirsan Culimada Ahlu sunna ayaa saxaafada maanta la hadlay wuxuuna beeniyay khilaaf Dhawaanahan la sheegayay in uu soo kala Dhex galay Ahlu sunna.
isku soo wada Duuboo Arrintan ku aadan Abaabulan Cusub ee Culimada Ahlu sunna ay sheegeen in ay ka wadan Dhamaan Goballada Dalka Soomaliya ayaa waxay u muuqanayaan in ay hada ku soo biireen Kooxo Diimeedyada u Dagaalamaya Xukumida Goballo ka tirsan Dalka Salkana ku haya Arrimo Siyaasada la xiriira.
Sheekh Aweys oo bilaabay in uu fagaarayaasha Dadka Muqdisho kala hadlo
Hogaamiyaha Ururka Xisbul Islaam Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa bilaabay dhaq dhaqaaqyo uu wax uga bedelayo siyaasadiisa Muqdisho.
Sheekh Xasan Daahir Aweys oo aan looga baran kasoo muuqashada meelaha ay shacabku ku badanyihiin ayaa hadda bilaabay in uu dhaq dhaqaaqyo sameeyo.
Mr. Aweys ayaa Khodbado diini ah ka jeediyay Masjidka Dabaqaynka degmada Huriwaa oo ay ku badan yihiin Dadkii Kabarakacay Waqooyiga Muqdisho.
Saraakiil katirsan Ururka Xisbul Islaam ayaa wado dhaq dhaqaaqyo ay shacabka uga digayaan la safashada dowladda kMG Somalia oo ay si weyn isku hayaan.
Shalay gelinkii dambe Khodbad uu sheekh Xasan Jeediyay wuxuu uga hadlay xaalada dalka Somalia isagoona sheegay in ay lagama maar maan ay tahay sii-wedida dagaalada ka socda Muqdisho.
Xoogaga Al Shabaab ayaa looga bartay in ay meelo fagaara ah kala hadlaan shacabka waxaase muuqanaysa in hadda ay Xisbul islaam shacabka taageero ka raadsanayaan ama ay ka gedayaan Fikirkooda Siyaasadeed ee magaca diiniga ah huwan.
War Deg Deg ah: Raiisul Wasaaraha DFKM Dr Cumar Cabdi rashiid oo caawa soo gaaray Dalka Kenya
Nairobi:-Raiisul wasaaraha DFKM Dr. Cumar Cabdirashiid ayaa caawa safar aan horay loo shaacin ku soo gaaray dalka Kenya gaar ahaa magaalada Nairobi, Raiisul Wasaaraha DFKM Dr.Cumar Cabdirashiid iyo wafdiga la socda oo aan tiro ahaan la shaacin ayaa la filayaa in ay la kulmi doono Hillary Clinton oo ka soo qayb galaysa shir ay usbuuca soo socda yeelan doonaa 7 Dowladood oo Afrikaan ah.
War Deg Deg ah: Hoobiyaal lagu weeraray Xarunta Gobolka Banaadir oo ay ku shirayeen Golaha Baarlamanka DFKM
MUQDISHO:-Ugu yaraan sadex ruux ayaa ku geeriyootay shan kalana dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib markii madaafiic hoobiye yaal ah lagu weeraray xarun ay ku shirayeen mudanayaasha Baarlamaanka KMG Somalia oo ku taala degmada Xamar-Weyne ee magaalada Muqdisho.
Dadka dhintay ayaa waxaa haleelay madaafiic bartilmaameedkoodu ahaa xarunta gobolka Banaadir oo ay fadhi ku lahaayeen baarlamaanka kaasoo ay la haleeli waayeen waxaana madaafiicda ay kula dhacday goobahooda oo ku yaala degmada Xamar weyne ee magaalada Muqdisho sida ay sheegeen goob joogayaal.
Kulanki maanta ay lahaayeen baarlamaanka oo uu shir gudoominayey gudoomiyaha baarlamaanka ayaa lagu kala booday iyadoo gudoomiyaha baarlamaanka uu ku dhawaaqay in kulanka baarlamaanka uu dib udhacay isla markaana maalinta birrito ah la isugu imaan doono.
Inkastoo madaafiicda lagu garaacay Xamarweyne uusan si caadi ah usaameyn baarlamaanka ayaa hadana gudoomiyaha Baarlamaanka waxaa uu sheegay in maalinta birrito ah ay kasii amba qaadi doonaan halka uu maanta umarayey kana doodi doonaan ajnadaha horyaalay kulanki maanta oo ahaa heshiiska bada ee Somalia iyo Kenya.
|Ciidamada Dowlada KMG Somalia iyo kuwa AMISOM ayaa jawaab ka bixiyey madaafiicda lagu soo tuuray fadhiga Baarlamaanka,waxaana wararky ay sheegayaan in ay ku dhaawacmeen ilaa iyo lix ruux xaafada Suuqa Bacaad oo ay ku dhaceen madaafiicda jawaabta aheyd ee ay ganeen ciidamada Dowlada.
Baarlamaanka Somalia ayaa maanta la filayey in ay g,aan kasoo saaraan heshiiskii ay dhawaan dowlada KMG Somalia la gashay dowlada Kenya ee ku saabsanaa soohdinta dhinaca badda.
Luulyo 28, 2009
Go’aanka Baarlamaanka looga eriyay Xildhibannadan Ma Shariif Xasan ayaa soo hindisay
Shaki kuma jiro in go’aanka soo yeeray Baarlamaanka ee lagu eriyay dhawr xildhibaan oo baarlamanka ka tirsanaa uu yahay go’aan siyaasadeed muddo laga soo shaqeynayay,waxaa la yiri fuli hantiisa ma mooga micno dharbaaxadan meesha ay ka socoto kuwa la eriyay ma mooga oo waa ay dareensan yihiin.
Warar hoose ayaa sheegaya in sababta xubnahan Baarlamaanka laga saaray ay tahay ka hadalka xildhibaanadan ay ka hadleen heshiiska Wasiirka Maaliyadda la galay shirkadda Price Water House Cooper PWC, oo xagga xisaabaadka qaabbilsan,taas la sheegay in ay maamuli doonto dhaqalaha Dowladda KMG ah.
Ilo muhiim ah oo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayan in Madaxweynaha,Ra’iisal Wasaaraha,Guddoomiyaha Baarlamaanka oo fikirkan ka dhaadhiciyay Wasiirka Maaliyadda ahna Ra’iisal Wasaare kuxigeen Shariif Sh Aadan oo isagu sabab u ah heshiiskan lala galay shirkan iyo heshiiska kale ee ku saabsan Badda ee lala galay Dowladda Kenya.
Shariif Xasan isagoo ka duulayay kulamo Magaalada Nairobi ku yeeshen Xildhibaano uu ka mid yahay Cali Maxamed Geeddi,Buubaa iyo Cali Baashi loogana hadlayay dhamaan heshiisyadaas ayuu qaaday tallaabo qaloocan oo uu ku burburinayo Baarlamanka iyo Dowladda KMG ah.
Go’aankan haddii si loo eego waa sharci laakiin waxaa is weydiin mudan Xildhibaannadan la eriyay ma iyaga ayaa ugu horeeyay oo imaan waayay shirarka Baarlamaanka,mise waxaa jira xubno aan soo xaadirin weligood fadhiyada baarlamaanka.
Sida muuqata Shariif Xasan waxaa uu eegay danihiisa Siyaasadeed,wuxuu dareemay in ay khatar ku yihiin xubnahan heshiisyada uu la soo galay shirkad maamuli doonto dhaqaalaha Dowladda.
Sh Aadan Madoobe waxaa uu yiri nimankan qaran dumis ayaa loo haystaa, yaa ka weyn Shariif Xasan oo Qaranka Somaliya dhibaato ku ah,isagoo xitaa lunsaday ama iibsaday qeyb ka mid ah Qaranimadii somaliya.
Waxaa muuqata in Afhayeenka Baarlamaanka lagu qasbay inuu go’aankan qaato,waxaana ka dambeeyay sida la sheegay Shariif Xasan Sh Aadan.
Bal eeg, Baarlamaankii ayaa weysan meel uu ku shiro, Madaxweynaha waxaa ilaaliya AMISOM,Ra’iisal wasaaraha sidoo kale Afhayeenka Barlamaanka sidoo kale Xildhibaankii yaa ka mas’uul ah amaankiisa horta inta aan qodob la sheegin waxaa ka horeeya in ammaanka la sugo markaas ayay xildhibaannada isku aamini karaan in ay dalka tagaan.
Xildhibaanada digniinta la siiyay waxaa ku jira Cali Maxamed Geeddi, balse warar hoose ayaa sheegaya in Geeddi is casilaadiisa qodobadii lagu heshiiyay ay ka mid ahaayen inaan la taaban karin xilkiisa, haddaba sidee loo wajihi doona xil ka qaadista Geeddi.
Haddaba go’aanka Baarlamaanka ee Sh Aadan Madoobe soo saaray waxaa loo arkayaa inuu yahay mid siyaasadeed oo ay ka dambeeyan xubno Shariif Xasan ka mid yahay,iyadoo loo cuskanayo arrintan xildhibaanadan la eriyay in ay mucaarad ku yihiin Xukuumadda Cumar C/rashiid iyo Xildhibaanadan oo diiday heshiisyada Badda kenya iyo somaliya iyo midka shirkadda Price Water House Cooper PWC, oo xagga xisaabaadka qaabbilsan.
Dowladda KMG ah ayaa waxay noqotay Guri uu maamulo Shariif Sh Aadan waxay lumisay Dowladda nidaamkii Xukumad lagu yiqiinay,waxay sheekadu noqotay qofkii aan shariif Xasan rabin Baarlamaanka waa laga erinayaa.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Luulyo, 2009.